Easter, eyahunyushwa isuselwa esiGrekini ngoba "ukukhululwa", uyisikhumbuzo walokho uKristu wakhuthazelela konke ukuhlupheka kwesintu, wavuswa ngosuku lwesithathu ngemva komngcwabo. Easter eNgilandi, i-Russia noma Italy - leli holidi Christian main, okuyinto elinde izigidi amakholwa ngonyaka emhlabeni wonke. Kulolu suku olukhulu ngoba bonke abakholwayo Orthodox ukukhululwa okunqobayo ekuhlunguphazweni ngebanga indodana kaNkulunkulu futhi isipho sokuphila okuphakade kubantu. Easter lugujwa, njengoba umthetho, ngelinye iSonto entwasahlobo. Kungani Easter lugujwa ngezikhathi ezahlukahlukene unyaka ngamunye?
Ngesisekelo umyalezo the New Testament, sokufa kukaJesu Kristu weza ekugubheni iPhasika lamaJuda, lolo kugujwa ngaphambili njalo ngemva kwenyanga yokuqala egcwele kulandela usuku ka ngesikhathi sokulingana kwemini nobusuku Vernal. Njengoba izinyanga zekhalenda lamaJuda ngaphambi kokuba iqale ngo-kwenyanga, egcwele ubelokhu zaba inombolo 14, kwathi ngenyanga yokuqala ngonyaka iqala on enyangeni yokuqala egcwele entwasahlobo, okungukuthi, Jewish Easter lugujwa njalo eduze Inyanga egcwele emva kwalolo suku, ngakho ngosuku Easter ziyoshintsha. Ekhulwini IV siye sazama ukhethe idethi ezivamile okuyiwona laliyolondeka ikakhulukazi kubalwa iPhasika ukusetshenziswa ngesikhathi sikaJesu. Ngakho, ukuze usungule "mobile" usuku olukhulu iholide lobuKristu, futhi manje wonke umuntu uyazi ukuthi kungani Easter lugujwa ngezikhathi ezehlukene.
The main Easter amasiko
Kukholakala ukuthi wonke umsebenzi wasekhaya ukwenza izinsuku ezintathu ngaphambi iholide. Ukwazi ukuthi kungani Easter lugujwa ngezikhathi ezahlukahlukene, usuku lapho ivela khona Kulula ukubala. NgoLwesine, lungakafiki usuku lukaJehova osekukade amafasitela ukugeza abathembekile, iphansi, ukuvumela ukukhanya okuningi endlini e iholide Omkhulu. ERussia, kukhona izinto eziningi ezihlobene ne Maundy ngoLwesine. AmaKristu bahlanza endlini, egcekeni ebhuqwini doti, fumigated nge Igumbi zokhuni, ingadi nezilwane, uzama okwethusa inkalankala ukugula kanye nezehlakalo ezibuhlungu ezamehlela. Khona-ke, abantu ngokuluhlaza ageza okugeza, futhi amantombazane ayesebenza nezinwele ezinde ngaphansi apula izihlahla sikhule izinwele mkhulu. Futhi kuze kube namuhla kunenkolelo lutho kungenziwa ngoLwesihlanu, ngisho ukugeza.
Easter Bright kuye kwasilethela eziningi amasiko amahle ukuthi uyakuthanda amaKristu obu-Orthodox namuhla. izitsha Main ezisebusweni kwetafula - kungcono amakhekhe ama-Easter futhi amaqanda amibalabala. Amakhekhe namuhla, bambalwa abantu ukubhaka, ngoba kulula ukuthenga esitolo. Amaqanda yamukelwe yathengwa-umbala stickers. Abaningi ukhohlwe kakade lavelaphi isiko akunika amaqanda amibalabala. Lolusiko esakuthola ngofuzo Saint Magdalena, ukuthi ngemva kokwenyukela kukaKristu ezulwini ukuba uMbusi uTiberiyu ethulwa amaqanda obomvu, iwuphawu ukufa nokuphila ka Jesu akunika, ngaphambi kokuqala homily kwakhe. Vele uthanda aphume kanzima igobolondo amaqanda ibonakala ecacile, futhi yavuka uJesu ethuneni wokuphila okuphakade.
Kungani Easter lugujwa ngezikhathi ezahlukahlukene? Udaba akulona ezibaluleke kakhulu kumaKristu. Abantu abaningi namuhla-ke kuba yisikhathi sokubutha umndeni kuthebula iholide, aphule amaqanda, nika amakhekhe, yathela nomunye athi bendabuko: "Kristu uvukile» - «Ngiqinisile uvukile!".
Usuku Doctor BakaJehova eRussia
Ixhuma kubhayela ngokwa
Komi - abantu aseNyakatho. Yayisekelwe Kuyinkolelo-ze, amasiko, amasiko
Amasosha Omzimba ukuze yegilo peroxidase
Restaurant "Truffle" (Ryazan): incazelo, ikheli, imenyu